Mental Healthy – Page7– Healthy Life Journal
———၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ‘ပျော်ရွှင်မှု’ဆိုတဲ့ အရာက ‘ကျန်းမာခြင်း’နဲ့ ဒွန်တွဲနေတာပါ။ ဘဝမှာ အရေးပါတဲ့ အရာက ဘာလဲလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးကြည့်တဲ့အခါ အလုပ်အကိုင်၊ ငွေကြေး၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ အချစ်ရေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နာမည်ဂုဏ်သတင်း၊ ကျော်ဇောမှု စတဲ့အဖြေတွေ...
COVID-19 ရောဂါနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး
———၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊——— COVID-19 ရောဂါကြောင့် စိတ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ရှိနိုင်သလား၊ ရှိနိုင်တယ်ဆိုရမယ်။ (က) COVID-19 ရောဂါ မခံစားရပေမယ့် ပြည်သူလူထုထဲမှာ ဖိစီးမှုဒဏ်ခံစားရသူ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ...
ယခင်အပိုင်းမှအဆက် —၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊— စိတ်ကျန်းမာရေး အတွင်းလူနာကုသမှု ဆွေးနွေးပွဲမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန် ဒေါက်တာနီလာက သူကုသပေးနေတဲ့ လူနာမေရဲ့ ရောဂါကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါတယ်။ “မေက “အမျိုးသမီးမပြီးနိုင်ရောဂါ” (Female Orgasmic Disorder)(FOD)...
—၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊— Q. ငယ်ငယ်တုန်းက အလုပ်လုပ်ရတော့ ကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်မစောင့်ရှောက်နိုင်ခဲ့ဘူး။ တစ်အိမ်တည်း နေပေမယ့် မိုးလင်း၊ မိုးချုပ် အလုပ်သွားနေရတဲ့အတွက် ကလေးတွေကျောင်းပို့တာ၊ ကလေးတွေစာကျက်တာ၊ ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးတာကအစ အဖေအမေ(ကလေးတွေရဲ့ အဘိုးအဘွား) တို့ကပဲ...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– နိဒါန်း အမျိုးသမီး ကာမဆက်ဆံခြင်း ချို့ယွင်းရောဂါ (Female Sexual Dysfunction) ၅ မျိုးရှိတယ်။ (၁) ကာမဆန္ဒလျော့နည်းကျဆင်းရောဂါ (Hypo-active Sexual Desire Disorder)...
—၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ၊— Q. သားအိမ်ထုတ်ထားတာ ၃လကျော်ပြီ။ စိတ်ထဲ သူများနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုပြီး ဝမ်းနည်းခြင်း၊ အားငယ်ခြင်း ခံစားရတယ်။ Sex ကိစ္စကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ထုတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းပဲ စိတ်မှာ တွေးမိနေတယ်။ စိတ်ထဲက တွေးမိတဲ့အကြောင်းကို နုတ်ပစ်ချင်တယ်။...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေး(Recreational Drug)၊ ပျော်ရွှင်ပွဲပါတီ မူးယစ်ဆေး(Party Drug)၊ ညကပွဲရုံမူးယစ်ဆေး(Nightclub Drug)စသဖြင့် အမည်တွင်တဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေအကြောင်းကို စာရေးသူရဲ့ မိတ်ဆွေကိုတာနဲ့ စကားလက်ဆုံကျနေပါတယ်။ ကိုတာက ဆက်လက်မေးမြန်းတယ်။ “အမ်ဒီအမ်အေ(MDMA)(အက်စ်တစီ)ဆေးလုံးနဲ့...
—————–၊ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား)၊—————- စာရေးသူရဲ့ မိတ်ဆွေကိုတာနဲ့ စာမေးပွဲဖိစီးမှုဒဏ်အကြောင်းပြောဆိုပြီးတော့ ကိုတာက မှတ်ချက်ချပါတယ်။ “စာမေးပွဲဖိစီးမှုဒဏ်ထက် ပိုပြီးဆိုးရွားတာက စာမေးပွဲပြီးရင် အပျော်ကြူးကြတာပဲဗျ” “ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ” “မနှစ်က ဂိုးကို့စ်မြို့တော်မှာ စာမေးပွဲပြီးလို့ အပျော်ခရီးထွက်လာတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် မူးယစ်ဆေးမူးပြီး ၆...